November 21, 2017 - मूल्याङ्कन अनलाइन
भच्चेकमा डा. भट्टराईको सभा भइरहँदा नयाँ शक्तिका केन्द्रिय सदस्य माओवादीमा प्रवेश
कमल गिरी | November 21, 2017
मंसिर ५, गोरखा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका केन्द्रिय सदस्य रामप्रसाद अधिकारी नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । गोरखा नगरपालिका-१० छेपेटारमा आयोजित चुनावी सभामा अधिकारी नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका हुन् । अजिरकोट गाउँ पालिका- ३ काफलडाडा स्थायी घर भएका अधिकारी नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल निकटको शिक्षक सङ्गठनका केन्द्रिय नेता समेत थिए । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र निकटको शिक्षक सङ्गठनको केन्द्रिय उपाध्यक्ष रहेका अधिकारी डा. भट्टराईले पार्टीबाट अलग्गिएर नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल गठन गरेपछि भट्टराईसँगै नयाँ शक्ति प्रवेश गरेका थिए । कार्यक्रममा अधिकारीले नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. भट्टराई अस्थिर र उधेश्य बिहिन व्यक्ति भएको आरोप लगाए । जनयुद्धका समयमा जेलनेल भोगेकोपूरा पढ्नुहोस्
‘एमाले र माओवादी रुपान्तरण हुन सकेनन्’ – डा. भट्टराई
मूल्याङ्कन अनलाइन | November 21, 2017
मंसिर ५, भच्चेक, गोरखा गोरखा–२ का उम्मेदवार तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एमाले र माओवादी रुपान्तरण हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले सोमबार गोरखाको भच्चेक बजारमा आयोजना गरेको चुनावीसभामा उनले विकास र समृद्धिका लागि आफूलाई जिताएर पठाउन आग्रह गरे । काँग्रेससँगको सहकार्यले मात्रै शान्ति र संविधान कार्यान्वयन हुने उनको भनाई थियो । सोही कार्यक्रममा काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिले अधिनायकवाद र लोकतन्त्रबीचको लडाइँ भइरहेको बताए । “अधिनायकवादमा फस्ने कि लोकतन्त्रमा रमाउने भन्ने निर्वाचनबाट टुंगो लाग्छ,” उनले भने । नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको विकल्प नरहेको चर्चा गर्दै उनले काँग्रेसले बहुमतसहितको सरकार बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । पूरा पढ्नुहोस्
मंसिर ५, बैतडी पहिलो चरणअन्तर्गत मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षाका लागि यस क्षेत्रका नेपाल–भारत सीमानाका तीन दिन बन्द हुने भएका छन् । निर्वाचनका लागि बैतडीको भारतसँग जोडिएको सीमानाका झुलाघाट र दार्चुलाको भारतसँग जोडिएको नाका ७२ घण्टाका लागि बन्द हुने भएको हो । चुनावलाई मध्यनजर गरेर यही मंसिर ७ गते राति १२ बजेदेखि सीमानाका झुलाघाटमा आवतजावत बन्द गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्घराज जोशीले जानकारी दिए । उनले उक्त समयमा बिरामीबाहेक अरु साधन र पैदलयात्रुले नाकाबाट आवतजावत गर्न नपाउने बताए । निर्वाचन प्रयोजनका लागि जिल्लाको आन्तरिक सुरक्षालाई पनि अत्यन्त चुस्त र सुदृढ बनाइएकाले मतदाताले ढुक्क भएर मतदानमा भागपूरा पढ्नुहोस्
‘चुनाव कहिले हो र ? हामीलाई त थाहै छैन !’
मंसिर ५, पाल्पा जिल्लाको बगनासकाली गाउँपालिका–१, घोरबन्दाका कुमाल समुदायमा चुनावी चहलपहल अझै देखिएको छैन । आगामी मंसिर २१ हुने प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि भोट माग्न कुमाल बस्तीको गाउँमा अहिलेसम्म दलहरू नगएकाले त्यहाँका बासिन्दा बेखर जस्तै भएका हुन् । मतदाता शिक्षाका लागि कोही पनि गाउँमा नआएको उनीहरू बताउँछन् । “घरमा बिजुली छैन, रेडियो, टिभी पनि छैन । हामीलाई चुनाव कहिले हो भन्ने थाहा नै भएन,” घोरबन्दाकी ४० वर्षीया ज्ञानीसरा कुमालले गुनासो गर्दै भनिन्, “ज्याला मजदुरी गरी गुजारा चलाउनुपर्ने बाध्यताले आफूहरूलाई चुनावसम्बन्धी कुनै जानकारी पनि छैन ।” घोरबन्दाकी ३० वर्षीया जनीसरा कुमालले आफूहरू सामु चुनावको जानकारी गराउने कुनै पनि साधनपूरा पढ्नुहोस्
आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद अर्को वर्षको मंसिर दोस्रो साता
मंसिर ५, नेपालगन्ज राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले आगामी वर्षको मंसिरको दोस्रो साता आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुने बताएका छन् । प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि भइरहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको अनुगमन गर्न सोमबार यहाँ आएका सदस्य सचिव विष्टले भने – ‘ठ्याक्कै मिति नै तोकर अहिले भन्न नसकिए पनि मंसिरको दोस्रो साता आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेछ ।” “हामीलाई अहिले १३ औँ दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता र राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको चटारो छ,” उनले भने, “त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । तर हामी तोकिएको समयमा दुवै खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गरेरै छाड्छौँ ।” सदस्य सचिव विष्टले आठाँै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितापूरा पढ्नुहोस्
टोरन्टो करातेमा नेपालकी यानकुमारीलाई स्वर्ण
मंसिर ५, काठमाडौँ क्यानडामा भएको टोरन्टो खुला तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा नेपालकी यानकुमारी चौलागाईंले सोमबार स्वर्ण पदक जितेकी छिन् । क्यानडास्थित टोरन्टो शहरमा भएको ५७ केजी तौल समूहको फाइनल खेलमा यानकुमारीले क्यानडाकी खेलाडी लौजन लौरिनलाई हराउँदै स्वर्णपदक हात पारेकी हुन् । त्यसअघि बाइ पाउँदै यानकुमारी फाइनलमा प्रवेश गरेकी थिइन् । नेपालबाट भाग लिने अन्य दुई महिला खेलाडी भने पदकविहीन रहे । टोरन्टोस्थित भेराइटी भिलेज एथलेटिक सेन्टरमा भएको खेलमा ज्ञानी चुनरा र रेजिना कार्की पहिलो चरणमै पराजित भए । महिला ४९ केजीमा रेजिना (क्यानाडा) तथा ६२ केजी मुनि ज्ञानी (क्युवा)का खेलाडीसँग पराजित भएका थिए । उक्त च्याम्पियनसिपमा करिब १ हजार १७५ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेकापूरा पढ्नुहोस्
मंसिर ५, बागलुङ सहकारी तथा गरिबी निवारण राज्यमन्त्री चम्पादेवी खड्काको बागलुङ नगरपालिका–२ स्थित घरमा गएराति बम विस्फोट भएको छ । राति ११ बजे भएको विस्फोटनबाट कुनै मानवीय क्षति भएको छैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ का उम्मेदवारसमेत रहेकी राज्यमन्त्री खड्का घरमै रहेको समयमा एक्कासि ठूलो आवाजसहित बम विस्फोट भएको थियो । घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले बताए । विस्फोटन गराउने समूहको पहिचान नभए पनि चुनाव बहिष्कारमा लागेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गराएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । “हामी अनुसन्धानमै छौँ, चुनावी वातावरण बिगार्ने उद्देश्यले विस्फोटन गराएको देखिन्छ,” प्रहरी उपरीक्षक खापुङले भने, “घटनामा संलग्नलाईपूरा पढ्नुहोस्